HIV/AIDS ကုပေးသော ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » HIV/AIDS ကုပေးသော ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
HIV/AIDS ကုပေးသော ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း။
Posted by mG on Mar 28, 2011 in News | 13 comments
ခေါင်းစဉ်ကိုသာ အဲ့လိုရေးထားရတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့ သေချာမသိရသေးဘူး။
ဒီ HIV/AIDS ရောဂါကိုတော့ ပျောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လို့တော့
ပြောထားတာ မတွေ့ဘူးဗျ။ကုပေးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ ပိုထူးဆန်းတာက ဘုန်းကြီးလုပ်တာတဲ့။ဆရာတော်ဟာ
အတွက်လည်း ဆက်သွယ်လို့ရအောင် . . . . . . . . . .
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊(၅-လမ်း)-ဘီ၊ပွိုင့်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် မှ (မမိုး) ဆိုသူထံမှာ စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရောဂါကျွမ်းနေတဲ့လူတွေကိုတော့ ပျောက်ကင်းဖို့အတွက် လုံးဝတာဝန်
မယူဖူးလို့လည်းဆိုထားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ ဝေသနာရှင်တွေ အနေနဲ့ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရမဲ့ပုံ
ပဲဗျ။ဆရာတော်ဟာ နှစ်(၃၀) လုံးလုံး ဖော်စပ်ထားတဲ့ အာယုဝတ္ထနဆေးကို စားသုံးနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်းကိုလည်း အာမခံထားပါသေးတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အောက်မှာဆရာတော်ရဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
M & has written 28 post in this Website..
I am very interesting this website program.
သဂျီးကတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ဆေးဖော်မြူလာ အပိုင်ဝယ်ဖို့ လုပ်နေပြီဗျို့။ သဂျီးရေ ခဏဆိုင်းပါအုံး။ သတင်းလေးဘာလေး နားစွင့်ပြီးမှ သွားလည်း နောက်မကျသေးပါဘူး။
တစ်ကယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သားတွေ ကမ်းကုန်အောင်မိုက်ကြဦးမယ်ထင်ပါရဲ့…..
သာသနာတော်ကို .. ပြန့်ပွားအောင်.. ဘာသာစကားမတူ..၊ ယုံကြည်မှုမတူသူတွေကြား စွန့်စားသာသနာပြုကြရတဲ့ ရဟန်းတော်တွေ .. ၇ပ်တည်နိုင်ဖို့.. သာသနာပြုနိုင်ဖို့.. ကားမောင်းခွင့်နဲ့.. ငွေကြေးစီမံခွင့်ကြတော့ ..ကားဆီးခံပြောရက်တဲ့ ရွာသားတွေ.. ဒီလို ပေါက်တတ်ကရကို.. ၀ိနည်းမညီလုပ်..လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးတာအပြင်..အသက်ပါ ပေးရအောင်လုပ်တဲ့. ဘုန်းကြိးမျိုးကျ… ဘာများပြောပေးကြမလဲ မသိဘူးနော…။
ဒါကတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ ဘုန်းကြီးများ ဆေးကုခွင့် မရှိပါ။
ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုံးနံပါတ် တင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်ချင်သူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလို့ လွယ်တာပေါ့။
သဂျီးမှာ အတွေးအခေါ် ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတယ်။ ကုပေးပါအုံး….တော်ကြာနေ မန်းဂေဇက် ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီ တန်လာမယ့်အချိန်ကို သူမမြင်လိုက်ရပဲ ဖြစ်မှာစိုးလို့….
အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် HIV/ AIDS ပျောက်အောင် ကုနိုင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမယုံပါဘူး ။ ကျော်အောင် ညာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … အနောက်တိုင်းဆေးတွေမှာတောင် လုံလောက်အောင် ဈေးကွက်ထဲ ချမပြနိုင်သေးဘူး ။ ကျမတွေ့ဖူးပါတယ်…
သူက စုံစမ်းရန် ဆိုတာမှာ လိပ်စာထည့်ထားတာလေ .. ကိုယ်တိုင် ကုတယ်လို့မှ ရေးထားတာ မဟုတ်တာ ..
တိုင်းရင်းဆေး ညီလာခံတွေမှာတော့ .. ဓါတ်ပြာ ချတယ်ဆိုတာ ကြားခဲ့ မှတ်ခဲ့ဘူးတယ် .. ပြဒါး ပါများ ပါသလား မသိပါ .. ၀ါးကို ပြာချပြီး လုပ်တယ် လို့လဲ မှတ်ခဲ့ဘူးတယ် (၂၀၀၀ ကျော်ကျော်လောက်မှာ ထင်တယ်)
HIV အကူးခံရပြီး စောစောစီးစီး သေသွားတယ်ဆိုတာ အဲ့သည်လူညံ့လို့… ကိုယ့်ဆီမှာ ပိုးရှိတယ် ဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် နေသွားရင် နောက် ၁၅ နှစ်ဆိုလည်း အသာလေးနေနိုင်တယ် နှစ် ၂၀ လည်းအသာလေးနေနိုင်တယ်.. အာရွှီးတာတော့မဟုတ်ဘူး.. တကယ်တွေ့ဖူးလို့ပြောပြတာ…… အခုခေတ်က HIV/AIDS ကိုကြောက်ရမယ့်ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး.. သူ့ထက်ဆန်းပြားပြီး ငေါက်ကနဲ သေသွားနိုင်တဲ့ရောဂါတွေအများကြီးပဲ…
သည်တော့ ကိုယ့်မှာ ပိုးရှိပြီဆိုတာသိတာနဲ့ နားလည်တက်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပါ… နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုခံယူပါ.. ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ လုံးဝ (လုံးဝ) မကုပါနဲ့.. ငါးပါးတင်မကဘူး သံဃာစင်ပါမှောက်သွားမယ်…
“etone says:အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် HIV/ AIDS ပျောက်အောင် ကုနိုင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမယုံပါဘူး ။ ကျော်အောင် ညာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … အနောက်တိုင်းဆေးတွေမှာတောင် လုံလောက်အောင် ဈေးကွက်ထဲ ချမပြနိုင်သေးဘူး ။ ကျမတွေ့ဖူးပါတယ်။”…………
မယုံတာကိုတော့ ပြောရခက်ပါတယ်။HIV ကနေ AIDS မရောက်ခင်မှာ
၁။ပျားရည်စစ်စစ်(မွေးပျားရည် မဟုတ်)၊ကြက်သွန်ဖြူ (ဗမာကြက်သွန်ဖြူအမွှာပါ)၊ရွှေအနည်းငယ်(လုံနှင့်ကြိုသောရွှေ)ရောစပ်ပြီး နေ့စဉ်သောက်ပေးနိူင်ပါတယ်။
၂။အာနာပါနကဲ့သို့(စိတ်ကုထုံး) တနေ့၂နာရီခန့် ၂ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
၄။ငါ(မသေနိူင်သေးဘူး၊မသေရဘူး)ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးလဲ နှလုံးသွင်းနိူင်ရပါမယ်။
၅။ခန္ဒာကိုယ်အရမ်းမလှုပ်ရှားရတဲ့ အလုပ်မျိုး (စာဖတ်၊ပန်းချီဆွဲ၊ပန်းထိုး….စသဖြင့်)လုပ်ပေးပါ။
ပျောက်တယ် လို့ ပြောကြတာထက် .. အသက်ရှည်အောင် ဆွဲဆန့်လို့ ရတယ် လို့ ပြောကြတာ ပို မှန်မယ် ..